कन्चनको अप्रेसन सफल ! घाटिमा प्वाल पारियो हेर्नुहोस भिडियो – Namaste Host
March 5, 2021 Bijay LamaLeaveaComment on कन्चनको अप्रेसन सफल ! घाटिमा प्वाल पारियो हेर्नुहोस भिडियो
कन्चन तिमिल्सिना आइसियु मा रहेका आज 61 दिन भयो ! उन्को आज अपरेसन गरेर मुख बाट दिइएको अक्सिजन पाइप लाई घाटिबाट प्वाल पारेर छिराइएको छ ! कन्चन तिमिल्सिना को स्वास्थ्यको बारेमा चासो आज तीन करोड नेपालीमा छ !
धेरैले उनलाई छिटो सन्चो होस भनी बिबिन्न देश बाट सहयोग रकम पठाइरहनु भएको छ ! आज 61 औ दिनमा आइसियुमै रहेका कन्चनको अबस्था कस्तो छ त यो जिज्ञासा् सबैलाइ छ !
कन्चनको पछिल्लो अबस्थाको कुरा गर्नुपर्दा उनी राम्रो सग बोल्न सक्दैनन पछिल्लोपटक भेन्टिलेटर मा राखिएको आज 22 दिन भएको छ । सामान्यतया भेन्टिलेटर मा राखेको बिरामिको मुख बाट भित्र हालिएको अक्सिजन पाइप दुई हप्ता भन्दा राख्न नहुने भएपनी रगतको मात्रा घटेकोले घाँटी छेडेर पाइप राख्न सकिएको छैन । कन्चनको सुरुमा दुबै खुट्टा मा प्यारलाइस को असर थियो भने अहिले हातमा पनि सहरेको छ र दुबै हात र खुट्टा चल्दैनन उन्को !
प्यारलाइस को असर अझै बढ्दो क्रममा छ ! नियमित थेरापी चलिरहेको छ र उस्को परिबारले पनि दिन्कै 7-8 चोटि हात खुट्टा मालिस गरिदिने गरेको छ ! स्वास्थ बिगृदै गएपछी जसकारण उन्को उपचार मा खटिएका नर्स तथा डक्टर र अन्य कर्मचारीमा निराशा छाएको छ ! बीस सग लड्नको लागि उन्लाइ दिदै आएको औसधि भने बन्द गरिएको छ तर प्यारलाइस ले नचेलेका हातखुट्टा कहिले रिकरभर हुन्छ भन्नेमा अन्योल छ आशा गरौ छिट्टै सण्चो हुन्छ र हिडेर घर जानेछन कन्चन !
यौ न क्षमता बढाउन चाहानुहुन्छ ? तुरून्त यी ११ चिज खानुहोस् !
लकडाउनमा एम्बुलेन्स भित्र यस्तो देखेपछि प्रहरी नै छक्क (भिडियो सहित)